NextMapping | Tababarayaasha NextMapping. Tababarayaasha
Tababarayaasha NextMapping. Tababarayaasha
Ma dareemaysaa kalsooni mustaqbalka? Ma ku faraxsan tahay fursadaha adiga iyo ganacsigaaga mustaqbalka? Shirkaddaadu ma leedahay istiraatiijiyad iyo qalab ay ku hogaamiso isbedel?
Tababarayaasheena NextMapping ™ iyo la taliyayaasha waxay ku siin doonaan qaab dhismeedka, taageerada iyo hagida si aad u abuurto mustaqbalkaaga ugu fiican ee suurogal ah. Qof kasta oo guuleysta wuxuu u adeegsadaa tababare ganacsi ama tabobar hogaamineed qaab hage / tababare / hage.
Tababarayaasheena ganacsi ee loo yaqaan 'NextMapping' ee shahaadada ganacsi ayaa iskaashi la yeelan doona si ay u dhisaan istiraatiijiyad, u dhiiri geliyaan mustaqbalka fikirkaaga shaqada waxayna kaa caawin doonaan inaad horumariso xirfadaha looga baahan yahay inaad ku guuleysato oo aad ku guuleysato waqtiga degdegga ah iyo xawaaraha isbeddelaya.
La kulan Tababarayaasheena NextMapping ™
Waxaa loo aqoonsaday # 1 Mustaqbalka Shaqada Saameynta Shaqaale ee Onalytica, iyo qoraa 9 buugaag oo ay ku jiraan daabacaadii labaad ee “NextMapping ™ - Aniticape, Jiidso oo Abuur Mustaqbalka ShaqadaWehelkaaga buugga shaqada. Buugaagta kale ee buugga waxaa ka mid ah “Hogaaminta Farshaxanimada Isbedelka - Wadida Wadista Wadista Degdega ah"(Wiley 2015),"Siyaabaha 101 Looga Sameeyo Jinsiyadaha X, Y iyo Zoomers Ku Farxaan Shaqada”(2010) iyo 4 buugaag oo ku saabsan xirfadaha hogaaminta ugu dambeysa ee loo baahan yahay si mustaqbalka mustaqbal shaqo loo diyaariyo.
Mustaqbalka shaqada Cheryl waxay u maleyneysay in hogaaminta lagu soo bandhigay qoraallada sida Huff Post, Forbes, IABC Magazine, Law Magazine, Metro New York, Magazine Magazine, Readers Digest, CBS Online, NBC Online, Fox Online iyo inbadan. In ka badan labaatan sano Cheryl waxay dhistay sumcad siinta qiimo aan caadi ahayn macaamiisha oo ay ka mid yihiin AT&T, Bell Mobility, Omnitel, Gartner, British Telcomm, Manulife, iyo sidoo kale shirkadaha dhexdhexaadka ah iyo ganacsatada ku jira warshadaha ay ka mid yihiin teknolojiyadda, caafimaadka, beeraha, maaliyadda, caymiska iyo kuwo kale.
Crystal Metz waa ganacsade heer sare ah isla markaana hogaamiye kooxeed ah. Waxaan ku faraxsanahay inaan helno Crystal madaama ganacsadehegu diirada saarayo Tababaraha NextMapping ™.
Sida Tababaraha NextMapping ™, Crystal waxay keenaysaa wadis, xamaasad iyo rikoodh la raacay oo la xaqiijiyey inay ka caawiso macaamiisheeda inay abuuraan guulo badan, carqaladaha guul gaadhka iyo abuurista xeelado cusub si loo abuuro waxa ku xiga.
Iyadu waa mulkiilaha Crystal Metz Insurance, oo ah shirkad caymis # 1 ah. Tan iyo bilowgii caymiska Crystal Metz wuxuu ka sii gudbay la tartamayaashiisa waxaana hoos imaanaysa hogaaminta Crystal inkasta oo ay si xawli ah isbeddeleyso warshadaha sanad ka badan sanadka. Crystal waxay u nuuxnuuxsatay guusheeda sidii ganacsade ahaan inay ku dhalatay kuna kortay qoys beeraley ah. Da 'yar, waxay baratay xirfadaha maaraynta, shaqada adag iyo adkaysiga oo ay weheliso jacaylka ganacsiga.
Ganacsade iyada oo da 'yar, horaantii 20-naadkii waxay furtay shirkad dhisme oo u gaar ah, QARNIGA 21 Medellis Realty. Boodboodkani wuxuu ku qasbay Crystal inay si dhakhso leh wax u barato, iyadoo la qabsanaysa hoggaanka koox iyadoo la fahmayo dhinacyada muhiimka ah ee ganacsiga. 5tii sano ee ay ordeysey ee ay ku shaqeyneysay xuquuqdeeda guryaha, koritaankeeda iyo aqoonta ay leedahay iyo waxa aan sameynin waxay ahaayeen casharo la bartay oo aan waligood ilaawin. Crystal waxay u weecisay diirada ganacsigeeda caymiska waxayna furtay caymiska Crystal Metz. Waxay ku kalsoon tahay guusheeda kooxdeeda - waxay ku dhistay meheradeeda iyadoo heshay dadka saxda ah lana wadaagaysa hoggaanka. Daacad u noqoshada kooxdeeda iyo ka qeybqaadashadeedu waa mid ka mid ah guulihii ay ku hanweyneyd ganacsade ahaan. Qaabka hogaamineed ee Crystal ayaa ah inuu qabto rajooyin iyo heerar sare halka tababarka iyo hogaaminta kooxdeeda dhaqanka hogaaminta la wadaago.
Sida Tababaraha NextMapping ™ ee Crystal u wadida guusha oo ay weheliso diiradda ay saaray dadka ayaa ah hadiyadeeda ugu weyn. Waxay la tartameysaa dadka si ay u baaraan waxa ka dhigaya inay ku faraxsan yihiin ganacsade ahaan iyo qof ahaanba ka dibna waxay ku siineysaa dhiirigelin iyo istiraatiijiyad kaa caawinaya inaad u shaqeyso.
Jacaylkeeda ayaa ah inay dadka ka caawiso inay dhisto oo ay xoojiso awoodooda, inay helaan kalsooni, ka caawiyaan iyaga inay koraan oo ay gaaraan wax aan macquul aheyn.
Crystal waxay ka caawisaa ganacsatada cilmi baarista suuqa, ganacsiga, xalalka kooxda iyo qorshe istaraatiijiyadeed. Marka loo eego Tababaraha xigta 'NextMapping ™ Crystal wuxuu ka caawin doonaa meheraddaada inay kobocdo heerka aadan weligaa fakarin. Waxay u keentaa qiimo aad u sarreeya sidii tababare ganacsade ah oo socod ku lugeeya isla markaana leh rikoor guul la xaqiijiyay.
Si aad wax badan uga ogaato tababarada ganacsatada ee Crystal halkan halkaan u tag: https://nextmapping.com/nextmapping-coaches/entrepreneur-coaching/
Marka loo eego hogaaminta kooxda NextMapping Reg Reg wuxuu leeyahay asal aad u weyn isagoo hogaamiye sare ka ah ganacsiga 25 sano.
Asalkiisa waxaa ka mid ah mustaqbal wanaagsan oo lagu sameeyo warshadaha baanka, horumarinta istaraatiijiyadaha ganacsiga ee laba ka mid ah magacyada waaweyn ee tafaariiqda ee Kanada (Best Buy iyo Future Store) iyo ganacsade iyo la-shaqeeye seddex shirkadood oo guuleysta.
Reg waxay leedahay ganacsi balaaran iyo khibrad wadatashi oo ay kujirto qaabeynta abaabulka iyo hormarinta, falanqeynta khilaafaadka iyo maaraynta, hogaaminta iyo hormarinta kooxda iyo istiraatiijiyadaha ganacsiga iyo hirgelinta ganacsiga.
Waxbarashada Reg waxaa ka mid ah Master of Arts Degree ee Falanqaynta Khilaafaadka & Maareynta ee Jaamacadda Royal Roads University.
Wuxuu ka go'an yahay inuu gacan ka geysto sidii loo horumarin lahaa horumarka iyo koritaanka ganacsiyada iyo shaqaalaha dhammaan heerarka isagoo bixinaya hal-abuurnimo, xalka hal-abuurka ah oo aan dhiirrigelin oo kicin waxqabadka sare iyo koritaanka laakiin sidoo kale u oggolaanaya shirkadaha inay ogaadaan, furaan oo sii daayaan kartida mid kasta oo ka mid ah shaqaalaha.
Dareenka Reg waa inuu ka caawiyo hoggaamiyeyaasha inay kordhiyaan la shaqeynta kooxda iyo sidoo kale inay ka caawiyaan hoggaamiyeyaasha heerka dhexe inay fuulaan jagooyinka fulinta.
Hogaamiyaasha iyo xubnaha kooxda ee uu leyliyo macalinku waxay si joogto ah u sheegtaa inuu bixiyo macno aan qiimo laheyn, aragtiyo iyo aalado looga caawinayo inay ku guuleystaan ​​goobta shaqada.
Qaabka 'Reg's as a NextMapping ™ Tababaraha' waa mid toos ah, falanqeyn iyo istiraatiijiyadeed leh diiradda saaraya caawinta dadka inay guuleystaan.
Ashley Farren waa tababari iyo lataliye NextMapping rtified oo sharciyeysan. Waxaan ku faraxsan nahay inaan helno Ashley kooxda NextMapping ™.
Ashley waxay si qoto dheer u fahansan tahay, istiraatiijiyad iyo iskaashi. Waxay leedahay taariikh balaadhan oo ah guulaha istaraatiijiyadeed ee shirkadaha caalamiga ah.
Taariikhdeeda mihnadeed waxaa ku jira sanadihii 12 sano ee Singapore gudaheeda doorka istaraatiijiyadeed ee Ganacsiga Ganacsiga HR ee u shaqeeya shirkadaha kala duwan ee ka kala socda warshadaha kala duwan oo ay ka mid yihiin Hi Tech, FMCG, Mining.
Muddo 6 sano ah, Ashley wuxuu u shaqeynayay Autodesk, istiraatiijiyad ahaan wuxuu horseed u ahaa howlaha HR ee howlaha Global Engineering oo ay kujiraan laba goobood oo waaweyn oo kuyaal Singapore iyo Shanghai (1200 shaqaale) iyo kooxo ka dhisan Mareykanka & Yurub.
Kahor tan, waxay ku qaadatay 12 sano Unilever iyada oo ka shaqeysa Aasiya oo dhan, Afrika, Bariga Dhexe oo taageertay howlo badan oo ganacsi (oo ay ku jiraan IT (Kaabayaasha iyo Nidaamyada Ganacsiga)) / Macaamiisha / Iibka, Suuqgeynta iyo Maamuleyaasha Horumarinta iyo Horumarinta.
Intii lagu gudajiray waqtigan waxay taageertay Ururka Kaabayaasha heer heer gobol oo asaasi u ah sameynta howlo adeeg wadaag oo caalami ah, iyo maareynta hirgalinta guud ahaan Africa iyo Bariga Dhexe, iyadoo intaas u sii dheer maaraynta dadaallada balaaran ee dibada.
Intii lagu jiray sannad-dugsiyeedkeedii 22, Ashley waxay fududaysay oo barnaamij-maamushay isbeddelo waaweyn oo abaabul oo ay ka mid yihiin dib-u-habeynno badan / qaab-dhismeedyo badan. Waxay leedahay hogaaminta isbeddelada maaraynta iyo barnaamijyada, kartida karti u leh iyo hanaanka maaraynta waxqabadka, hirgelinta kala duwanaanta iyo isugeynta kaqaybgalka hogaaminta hogaamiyaasha sare iyo maamulayaasha, barnaamijyada kaqeyb galka shaqaalaha, fududeynta sameynta howlaha HR.
Hélène Hamilton waa tababare haysta shahaadada ICF wuxuuna keenaa khibrado kala duwan iyo istiraatiijiyado guusha macaamiisha badan kooxda NextMapping ™.
Asalkeeda waxaa ka mid ah in ka badan 30 sano oo waayo-aragnimo hoggaamineed ah oo ay ku jiraan sannadihii 15 sano oo ah fuliyaha sare. Hélène waxay keentaa khibrad ku saabsan horumarinta hay'adda iyo Kheyraadka Aadanaha. Macaamiisheeda ayaa ka mahadceliya awooda ay u leedahay inay ka caawiso xalka hal abuurka adduunka sii murugsan.
Iyadu waa qoraa “Qarsoodiga ugu Fiican ee La Shaqeynta Shaqaalaha” (2017) waxaana lagu cadeeyay Nova ™ Profile-ka iyo aaladaha kale ee hogaaminta.
Warshadaha ay la shaqeyso waxaa ka mid ah daryeelka caafimaadka, waaxda dowladda, waxbarashada iyo ganacsiyada yar yar.
Aqoon isweydaarsiga Hélène iyo macmiisha tababaradu waxay qadarinayaan awooda ay u leedahay inay si deg deg ah ku hesho xaalada, fikirkeeda istiraatiijiyadeed iyo qaabkeeda laqabsashada ee ka caawinta hogaamiyaasha iyo xubnaha kooxda inay dhisaan awoodooda mustaqbalka inay hada diyaar u yihiin.
Diyaar ma u tahay inaad nagu xidho oo aad la shaqeyso tababarayaashayada iyo lataliyayaasha NextMapping ™
Waanu kaa daboolnay - gaadho, waxaan jeclaan lahayn inaan kula soo xiriiro.
NextMapping ™ waa geedi socodkeena ganacsiga iska leh kaas oo ka caawiya ururada, hogaamiyaasha, kooxaha iyo ganacsatada inay sare u qaadaan awooda ay ku maraan mustaqbalka isla markaana ay kaga horreeyaan shaqada hada diyaar u ah.
Mustaqbalka Koorsooyinka Khadka Tooska ah ee Shaqada
Tababbarka Hoggaaminta oo leh tababbar ikhtiyaar oo taageero ah hogaamiyaasha si kor loogu qaado xirfadahooda si ay hada diyaar ugu noqdaan.